Lawula ukusetyenziswa kweefowuni zakho ngeNdleko eziSelfowuni | I-Androidsis
Lawula ukusetyenziswa kweefowuni zakho ngeNdleko zeSelfowuni
UAlfonso de Frutos | | Ukusetyenziswa kwe-Android
Enye yeengxaki ezinkulu zeefowuni eziphathwayo kukusetyenziswa kweefowuni. Kulungile, kuyacaca ukuba xa unefowuni uza kufowuna kwaye ke wenze iindleko zemali, kodwa kunganomdla ukukwazi ukulawula iindleko zeefowuni zakho ngalo lonke ixesha. Kwaye ngoku, Enkosi ngeNdleko zeFowuni, uya kuba nakho ukulawula oku kusetyenziswa.
Emva kwegama elithe ngqo kukho isicelo esinomdla kakhulu nesaseSpain. Kwaye yintonie InkcithoMovil inokuqwalaselwa ngokupheleleyo, ikuvumela ukuba ukhethe elinye lamazinga achazwe kwangaphambili, apho uluhlu lwamaxabiso amangalisayo adwelisiweyo (ubungqina boku kukuba inqanaba lam Ipepephone), okanye wenze ireyithi ngokwakho. Nje ukuba ukhethe ireyithi, iya kwenza irekhodi ngokuzenzekelayo nazo zonke iifowuni ezenziweyo kunye neendleko zazo.
IindlekoMobile igcina ilog kunye nazo zonke iifowuni ezenziwa inyanga nenyanga ngedatha enje ngomamkeli okanye ubude bexesha, kunye nexabiso, inkcukacha abanye abanokuyifumana ingeyomfuneko. Kodwa ukuba ngoku ndiyakuxelela ukuba ngale rekhodi ungabona oyena mntu umbiza kakhulu, leliphi ixesha oqhele ukwenza ngalo uninzi lweefowuni zakho kwaye usebenzise le datha ukutshintsha ube kwinqanaba elikulungele kakhulu kwaye likuvumela ukuba ugcine imali, izinto zitshintsha inyani ?.
Olunye ulwazi olunomdla noluncedo lwe IindlekoMobile kukuba ikuvumela ukuba wenze ukulingiswa kwetyala, ukhetho olunomdla ukuba ucinga ukuba umqhubi wakho uzama ukulifaka lisongelwe. Okokugqibela, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba esi sicelo sisebenza nakweyiphi na Inguqulelo ye-Android kwaye isimahla. Kufuneka ungene kwi-Android imarike kwaye uyikhuphele. Ewe kunjalo, inokukhetha ukuba wenze umnikelo nge-Paypal ukuba ubona kufanelekile.
Iindleko zeselfowuni kwi-Android kwi-AppBrain
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Lawula ukusetyenziswa kweefowuni zakho ngeNdleko zeSelfowuni
Izimvo ezi-18, shiya ezakho
lava encinci encinci sitsho
yenzayo 11 iminyaka
Ndiyifumana le nkqubo inomdla kakhulu. Kodwa ungathethi nto ngokubeka inombolo oyitsalelayo yeyiphi inkampani. ngaba iyifumana ngokuzenzekelayo? ukuba akunjalo, kukusilela okukhulu kwaye inkcitho ayinakulungiswa.
Ndingumbhali wesicelo. Hayi, usetyenziso aluboni ukuba yeyiphi na inkampani oyifowunelayo. Oko kuyakuba kukusilela kulawo maxabiso aneendleko ezahlukileyo ngokuxhomekeke kwinkampani oyitsalelayo, ukuba ikho, kodwa andicingi ukuba luhlobo lwenqanaba lesininzi.
Isicelo asigubungeli indalo iphela yeentlobo zeerhafu ezihambayo, ndisebenza ukuze inani leentlobo zeerhafu ezixhaswe sisicelo liyanda, kodwa amaxabiso ahlala engaphandle kwale nkqubo.
Oko silapha, ukuba umntu uyayazi inkqubo yokwazi inkampani elilelakhe inani (elinomcimbi wokuthwala unezinto ezinzima), nxibelelana nam, ndinomdla kulo mbandela.
Ndicinga ukuba kungcono ukuvavanya isicelo, qwalasela ireyithi (ukuba unamathandabuzo onokundibuza) thelekisa iziphumo kunye nenqanaba lokwenyani kwaye ukusuka apho ubone ukuba isicelo sinokuba nomdla kuthi okanye hayi.
Esi sicelo sibonakala siluncedo kum, xa ndiyifunda kwiwebhu ndizinike umsebenzi wokuyifaka kwi-x10 yam, isebenza kakuhle, nangona kunjalo ndiyacotha ukuyicwangcisa, ndivela eMexico kwaye inkampani yam yiTelcel, ngethemba kuhlaziyo abanokubeka idatha yale nkampani.
Kwenzeka kum ukuba umsebenzisi angayibeka kuhlobo oluthile lomfowunelwa. Ayizenzekeli kodwa inokunceda ...
Banokubeka iirhafu zeefowuni eziphathwayo, zininzi kodwa le inye
Sele zibekiwe, kuhlaziyo olulandelayo bazakuvela, endinako ukuthandabuza, kwiphepha lika-Ono khange ndikwazi ukubona ukuba liphi, lithini inqanaba kanye kwimida ye-100min., 200min ,,…. ?
Ndiyakholelwa ukuba iirhafu nje ukuba imida idlulisiwe, iisenti ezi-5 kwiifowuni eziphathwayo kunye neesenti ezisi-8 kwabanye abasebenzisi.
Kwinqanaba leVodafone, amanani e-VIP alahlekile.
Ndiyifakile le "myplan" kwaye eyokugqibela ibonakala iluncedo kum. Umzekelo, xa ugqibezela umnxeba, ikuxelela elona xabiso layo, kwaye kukho uluhlu olunazo ZONKE iirhafu ZONKE iinkampani zaseSpain, ezi-odolwe sisixa, ngokweefowuni zakho, ke kulula kakhulu ukwazi , yeyiphi inkampani ekubheja kuyo.
Kwiphepha le-cmt.es kukho icandelo apho ngokufaka inombolo yeselfowuni ikuxelela ukuba yeyiphi na inkampani, ngoku andikhumbuli ukuba iphi kanye kwiphepha.
nokuba ndijonge kangakanani le sicelo kwintengiso ayibonakali, ngaba kukho umntu owaziyo ukuba le okanye into eyenzekileyo kuyo?
Kuya kufuneka, ndiyifakile izolo kwaye intle
Namhlanje ndiyifakile kwi-Desire Z (hayi ingcambu) yomhlobo, xa ndibeka isicwangciso ngokuchanekileyo, yonke into isebenze ngokuchanekileyo. Emva koko ndongeze elinye icebo (i-150mins kusasa) kwaye xa ndibuya, ndafumana impazamo kwaye ndavala ngenkani. Ndizamile kwakhona ngokufanayo. Ndisicimile isicwangciso sakusasa kwaye nangoku, ngenisa ukuvalwa. Ndiyikhuphile, ndaphinda ndafaka into efanayo. Naziphi na izimvo?
Ndithumele imeyile iindlekomovil@gmail.com kwaye siyabona ukuba kwenzeka ntoni.
Kulungile, nangona iintsuku ezininzi ziya kudlula, ndide ndibeneselfowuni ezandleni zam kwakhona kwaye ndizame kwakhona, njengoko benditshilo, iselfowuni ayisiyam, ukuze ndikwazi ukukunika iinkcukacha ezithe kratya.
NdikwiSifiso sam seentsuku ezi-2, ingcambu, kunye ne-Aurax 8.2 ukuza kuthi ga ngoku, ilungile.
Siza kuthetha kungekudala.
Umntu uthi zonke izicwangciso zikhona kwaye akunjalo, umzekelo, le Ono mobile ayikho
Ngubani othe zonke izicwangciso zikhona? Kukho phakathi kwezicwangciso ezingama-55-60 kwaye zininzi ezinye ezingekhoyo. Kungenxa yoko le nto ndimilisele ithuba lokudala amaxabiso akho kwaye nangona kunjalo, kukho abasebenzisi abangazukukwazi ukumisela inqanaba abanalo. Sele ndivakalisile ukuba isicelo sinemiqathango kwaye kancinci kancinci ndiza kubandakanya ezinye iintlobo zerhafu ezixhasayo, kodwa oko kuthatha ixesha.
Amnesia, bendingathethi kuwe, kukuba ezinye izimvo ezivela komnye umntu zithi enye inkqubo ebizwa ngokuba yiMyplan inazo zonke izicwangciso, ndithetha ukuba omnye umntu. Ngokuphathelele kwinkqubo yakho yokuchitha imali, iyamangalisa kum, eyona nto iphambili kukuba ndineselfowuni kwaye ayikho, kodwa ndisasebenzisa eyakho, enkosi ngokwenza ubomi bethu bube lula kancinci.
IMoto Motorola i886, iibhodi yezitshixo ezimbini kunye netekhnoloji ye-iDEN kwi-android ekhethekileyo
Sibona kwakhona i-Aigo A8, ikhamera ye-14 megapixel kunye nefowuni ye-Android njengesipho